Gudoomiyaha Guddiga Maalyadda Aqalka sare & Wasiirada Maaliyadda Dowlad Goboleedyada oo Gaowe ku kulmay – Kalfadhi
Gudoomiyaha Guddiga Dhaqaalaha iyo Maalyadda ee Aqalka sare Abdi Axmed Dhuxulow, Xubno ka tirsan Aqalka Sare iyo Wasiirada Maalyadda ee Dowlad Goboleedyada iyo sharci yaqaano ayaa ka qeyb galay kulan ka qabsoomay magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland.
Ujeedada kulanka ayaa ku saabsanaa, Dhageysiga talooyinka Dowlad Goboleedyada ee Sharciyada kala ah Sharciga Maareenta Maalyadda,Sharciga Hanti Dhorka Guud ee Qaranka, Sharciga Iibka Qaranka ,Sharciga Canshuuraha Furdooyinka iyo .
Xubanaha ka socda maamul goboleedyada ayaa inta uu kulankan socdo talooyin iyo fikrado ku darsan doona sharciyadan oo ka dib dib loogu celin doono golaha aqalka sare si ay u meelmariyaan.
Gudoomiyaha Guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda Aqalka sare Axmed Cabdi dhuxulow ayaa ugu horey Ka hadlay ujeedada kulankan.iyo ahmiyadda uu u leeyahay maamul goboleedyada
Wasiirka Maalyadda Dowlad Goboleedka Buntland ayaa u mahad celiyay Guddiga maalyadda Aqalka Sare wuxuuna sheegay Inay taageerayaan In la helo wax Soomaali oo dhan dan u ah.
Sharciyadda Maareenta Maalyadda,Sharciga Hanti Dhorka Guud ee Qaranka ,Sharciga Iibka Qaranka , iyo Sharciga Canshuuraha Furdooyinka ayaa horey loo marsiiyay Golaha shacabka iyo golaha Wasiirada waxaana la filayaa in kadib marka lasoo dhameeyo wadatashigan lala yeelano dowlad goboleedyada In dib loogu soo celiyo golaha aqalka sare si ay u meel mariyaan kadibna ay ugu dambeyn ugu gudbiyaan madaxweynaha Soomaaliya oo isna saxiixi doono si ay ansax u noqdaan sharciyadan.
Baarlamaanka Soomaaliya imisa Baarlamaanno oo Caalamid ah ayuu xiriir la leeyahay?